/Blog/Ithala/I-Flibanserin ilinceda njani ibhinqa njengeHormone yesini
ezaposwa ngomhla 11 / 11 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Ukungasebenzi ngokwesondo kukholelwa ukuba yinto eqhelekileyo emadodeni, kwaye unethamsanqa kubo; Uluhlu lweendlela zokukhetha onokukhetha kuzo zonke iViagra, Cialis, kunye neziyobisi ze-ED. Banokonyango lwehomoni ukunceda ukubuyisela ukuqhuba kwabo ngokwesondo. Abafazi baziva belahliwe koku. Ngethamsanqa, banokhetho nabo. Abasayi kulwa neminqweno elahlekileyo yesini, ingxaki ekhokelela kuqhawulo-mtshato oluninzi. NgeFlibanserin (167933-07-5), banendlela yokunyusa umdla wesondo.
I-Flibanserin (167933-07-5), ethengiswa phantsi kwegama Addyi Ngaba iyeza elisetyenziselwa unyango lwezinto ezinokuthathelwa ingqalelo kubantu ababhinqileyo, ngakumbi ezo zinengxaki yokuxhaphaka ngokwesini. Yeyiphi inkanuko yesini oyifunayo? Le yimeko ebonakaliswa yiminqweno yesini ephantsi, enokuthi ikhokelele kubunzima okanye uxinzelelo phakathi kwabantu. Le ngxaki ayifanelanga ukuba ibangelwa yimicimbi yezempilo okanye iingxaki zobudlelwane. Kwakhona, ayingombandela oza ngenxa yeyeza okanye ukusetyenziswa kweziyobisi.
Kufuneka uyiphawule loo nto Flibanserin ayenzelwe ababhinqileyo abasele befikile kwisimo sokuyeka ukuya esikhathini. Kwakhona, ayifanelekanga emadodeni. Eli yeza linikezelwa phantsi kwenkqubo ekhethekileyo, okuthetha ukuba umntu kufuneka ebhalisiwe kule nkqubo ngaphambi kokufumana iyeza. Le nkqubo inceda abasebenzisi ukuba bafunde izibonelelo kunye nemingcipheko eza nokusetyenziswa kweli chiza, kwaye ngale ndlela, banokwenza isigqibo esifanelekileyo malunga nokuba kufanelekile kubo okanye akunjalo. Kwakhona, abasebenzisi kufuneka baqonde ukuba eli liyeza alifanele lisetyenziswe njengesixhasi sentsebenzo ngokwesondo. Endaweni yoko, yenzelwe ukunceda abo baneminqweno yesini ecothayo ngaphandle kwesizathu.
I-Flibanserin isebenza njani kubafazi?
Uninzi lwabafazi bayathandabuza ukusebenzisa le mveliso kwaye abaqinisekanga ukuba bayayisebenzisa na okanye hayi. Isizathu kukuba, boyika ukuba isenokungasebenzi. Inyani yile, nangona le mveliso isebenza, ayisebenzi kuye wonke umntu. Wonke umntu uphendula kuyo ngendlela eyahlukileyo, kwaye ngenxa yokuba usebenzela omnye umntu akuthethi ukuba iya kusebenza ngendlela efanayo kuwe. Nangona kunjalo, i-60% yabo basebenzise eli chiza banika uphononongo oluqinisekileyo kwaye baxela ukuba amayeza abo anika iziphumo ezilungileyo.
Owona mbuzo uphambili, nangona kunjalo; Ingaba isebenza kanjani? Akukhange kufumaneke nto icacileyo kumatshini osetyenziswa leli liyeza ukuvelisa iziphumo. Nangona kunjalo, abaphandi beza nethiyori, kulandela inyani yokuba i-serotonin inoxanduva lokuthintela umsebenzi wesondo, kwaye bafumanise ukuba uFlibanserin (167933-07-5) kunciphisa umsebenzi we-serotonin kwingqondo. Oku, ngokubuyisa, inkanuko yesini yowesifazane. Kwakhona, iyeza linempembelelo ethile engathanga ngqo kwi-norepinephrine kunye ne-dopamine, ekwanxulumene nomnqweno wesondo ophuculweyo.
Ngokungafaniyo neViagra kunye namanye amayeza ahambelana nesondo emadodeni, eli chiza ngokuyintloko lisebenza ngokujolisa kwingqondo. Ikwenza oko ngokwandisa amanqanaba e-neurotransmitters asetyenziswa yingqondo yakho ukuvuselela umdla wesondo.
Ngokubanzi, ichiza lityhala phantsi amaqhosha amabini amakhulu engqondo anoxanduva lokukhuthaza iminqweno yesini ngelixa kuthintela ii-neurotransmitters ezinoxanduva lokucinezela umdla wesondo kwabasetyhini. Eli chiza laziswa kwimarike emuva kwi-2015 emva kokuba i-FDA ivume ukunyanga oko ifunyenweyo I-HSDD kubafazi.
Nangona kungekho lwazi lucacileyo malunga nokuba luhlobo olunjani lwamabhinqa anokuxhamla kolu nyango, kukhuselekile ukuba ichiza lisetyenziswa ukunyanga iminqweno yesini elahlekileyo ngokwesini. Oku kuthetha ukuba kusebenza kuphela xa kungekho ndleko ichanileyo yokufumana inkcitho ngokwesondo, njengokulahleka komdla kubudlelwane okanye ngenxa yezinye iziyobisi. Kwaye, ayenzeli abo bajongana neziphumo zokuya esikhathini. Iyeza lavavanywa kwabasetyhini abane-HSDD. Abafazi bonke babenobudlelwane bexesha elide obuzinzileyo, oko kuthetha ukuba ingxaki yabo ibingekho ngenxa yolwalamano olungonwabisiyo. Babenomnqweno wesini kwixesha elidlulileyo kwaye babenexhala lokuba ngokuthe ngcembe bayaphulukana nayo kwaye babekhangela indlela yokufumana kwakhona.
Aba bafazi banamava malunga nalo mbandela kangangeminyaka emihlanu, kwaye babanga ukuba abanayo iminqweno yesini kumaqabane abo othando okanye omnye umntu. Malunga ne-50-60% yabafazi basabele kakuhle kunyango, ngelixa abanye bephendula kakubi. Abanye banomnqweno wesondo wabanye abantu kunokuba amaqabane abo, kwaye ke akukho lwazi lucacileyo malunga nendlela umzimba wakho oza kuphendula ngayo kunyango.
Omnye umbuzo obuzwa rhoqo phantsi kwela chiza usebenza njani kuthatha ixesha elingakanani ukubona iziphumo. Kwakhona, eli nqaku linokwahluka ukusuka komnye komnye komnye, ubukhulu becala ngenxa yokuba lisabela ngokwahlukileyo. Nangona kunjalo, iimvavanyo zicebisa ukuba kuya kuthatha ukuya kwiiveki ezine ukubona iziphumo zokuqala kunye ukuya kwiiveki ezilishumi elinambini kwiziphumo eziphezulu. Wena, nangona kunjalo, kufuneka uyisebenzise ngokuchanekileyo ukuze ubone iziphumo.
Umthamo ophakanyisiweyo ziingcali yi-100mg, ekufuneka ithathwe ngomlomo, kube kanye ngemini. Kungcono ukuba isetyenziswe ngexesha lokulala okanye lokuphumla. Kungenxa yokuba ukuthatha eli liyeza ngexesha lokusebenza okanye xa umzimba wakho usebenza ngokukubeka emngciphekweni wokukhula kwes syncope, uxinzelelo lwenkqubo ye-nerve ephakathi, uxinzelelo lwengqondo, okanye unokufumana ingozi.
Kwenzeka ntoni ukuba uphosa ithamo?
Ukuba uyaphoswa Flibanserin Umthamo ngexesha lokulala, kucetyiswa ukuba ulinde kude kube lixesha lokulala ukuze ulawule ichiza.
Ukusela kakhulu eli liyeza akuthethi ukuba uza kufumana iziphumo ezikhawulezileyo. Endaweni yoko, kuya kukuzisela kuphela iziphumo ebezingalindelekanga. Kuyacetyiswa ukuba xa ngengozi ushiye i-overdose okanye ukrokrela ukuba ukwenzile, funa unyango kwangoko.
Uyayeka nini ukusetyenziswa kwawo?
Kuya kuyeka ukusetyenziswa kwesiyobisi emva kweeveki ezisibhozo zokusetyenziswa ngaphandle kokuphuculwa. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, iyeza lisebenza ngendlela eyahlukileyo kubantu abohlukeneyo. Abanye banokuqala ukubona iziphumo ngokukhawuleza, ngelixa abanye banokuthatha ixesha. Nangona kunjalo, akufuneki kukuthathe ngaphezulu kweeveki ezisibhozo ukuze ufumane amava ophuculo oluncinci. Ukuba oko kuyenzeka, kubonisa ukuba imveliso ayikulungelanga, kwaye kungcono ukuba uyekile ukusetyenziswa kwayo.
Kuxhomekeka kwimeko, unokutshintsha i-dosage yakho ukuba ibe yephakathi okanye eyomeleleyo ngokusekelwe kwi-CYP3A4 inhibitors. Kucetyiswa ukuba uzisa ukusetyenziswa kweFlibanserin esekwe ngokumodareyitha okanye eyomeleleyo CYP3A4 inhibitor, emva koko kuya kufuneka uqale emva kweeveki ezimbini ukusuka kumyinge wokugqibela we-CYP3A4 inhibitor. Ukuba ufuna ukuguqula i-CYP3A4 inhibitor ngokokusetyenziswa kweFCIBANSERI, kuya kufuneka uyenze kwiintsuku ezimbini emva kwedosi yeFlibanserin yangaphambili.
Kuya kufuneka uqaphele ukuba eli chiza lilungile kwabo bafunyenwe i-HSSD, oko kuthetha ukuba umba uyenzeka kubantu ababengenazo iingxaki zempilo. Kwakhona, ingxaki akufuneki ukuba ibangelwa zizinye izinto okanye ngenxa yokupheliswa kokuya esikhathini. Ukuba unayo i-HSDD ngaphandle kwemeko, iqabane, okanye ukhuthazo, ke le mveliso yeyakho. Ukuba ulahlekelwe yiminqweno yesini mhlawumbi ngenxa yokuba uxinezelekile, ubuxakekile ngumsebenzi, okanye awusekho kwimeko elungileyo neqabane lakho, eli liyeza asiyonto oyifunayo ukusombulula iingxaki zakho. Ayenzelwe ukuphucula ukusebenza ngokwesondo, kodwa endaweni yoko, yenzelwe ukukhuthaza iihomoni zesondo. Kwakhona, akufuneki isetyenziswe ngamadoda.
Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga zokusebenzisa iFlibanserin?
Yonke into enezibonelelo ineziphumo ebezingalindelekanga. Eyona Inzuzo yeFlibanserin kukuba ibonelela ngokwandiswa okubonakalayo kwidrive ngesondo. Isebenza ngokugqibeleleyo njengonyango lwe-HSDD kunye nophando lwesayensi kunye novavanyo lwe-anecdotal olubonisa ukuba lubangela ukonyuka komnqweno wesondo kunye nomdla. Nangona kunjalo, iyeza alisebenzi rhoqo, kwaye kuya kufuneka ulisebenzise ngengqondo evulekileyo. Ichiza alenzelwanga ukunyangwa komnqweno wesini olahlekileyo ovela kunyango olukhoyo okanye kolunye uqoqosho okanye ukusilela komzimba. Kwakhona, ayizukusebenziseka ukuba okwangoku usebenzisa ezinye iides ezinokuchaphazela umnqweno wakho wesini, njenge-antidepressant. Kuya kufuneka ukuba uvumele ugqirha wakho ukuba akuvavanye kuqala ukuze uqiniseke ukuba ukulungele na ukusebenzisa eli chiza nokuba liza kukusebenzela.
Akufuneki ulisebenzise eli chiza ukuba unazo naziphi na iingxaki zempilo ezinje ngesifo sentliziyo, uxinzelelo lwegazi, okanye isifo seswekile. Kuya kufuneka ugqirha wakho akuncede ukuba ulawule imiba kuqala ngaphambi kokuba usebenzise iyeza.
Ngaphambi kokuvunywa kokusetyenziswa, iziyobisi kufuneka zihlolwe yi-FDA ukufumanisa ukuba kukhuselekile ukuba zingasetyenziswa. Nangona kunjalo, i-ADDYI phakathi kwalamachiza ayikaze igqitywe ngokupheleleyo ukuba ngaba ikhuselekile ukuba ingasetyenziswa. Iyeza lingqineke liluncedo kakhulu ekwandiseni iLibido nasekuncedeni abo basetyhini abaneminqweno yesini elahlekileyo. Ifunyenwe inoluhlu lwezibonelelo kunye nanjengesisitha esikhulu solwalamano. Nangona kunjalo, i-FDA yafumanisa ukuba iyeza liza neziphumo ebezingalindelekanga, konke oko kusiba nesiyezi, ukulala, kunye nokuba ngathi uza kugabha. Ezo ziqhelekileyo Iziphumo ebezingalindelekanga zeFlibanserin, kodwa i-FDA yayinexhala malunga nemiphumela emibini ebalulekileyo abantu ekufuneka benexhala ngayo yeyiphi;
Ukuba lisetyenziswe gwenxa, eli chiza lineziphumo zokunxaxha, kwaye abanye abantu bayalisebenzisa ngezizathu eziphosakeleyo njengoko bezama ukufumana ukulala okuzolileyo, okufanelekileyo. Ukuba oku kuyenzeka, abasebenzisi balala iiyure ezininzi kunokuba befanele. Oku, xa kubuyiswa, kuchaphazela ukuveliswa kwazo ngokuyintloko ngenxa yokungaxineki kunye nokulala ngexesha elingalunganga.
Ukusilela ngenxa yokuhla kwexinzelelo lwegazi
Le yeyona mpembelelo iyingozi kakhulu, kwaye kwenzeka kakhulu xa ichiza lisetyenziswa ngexesha elingalunganga. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iyeza lifanele lisetyenziswe xa ulele okanye uphumle. Ukuphatha iyeza ngexa lokuvuka okanye xa umzimba wakho usebenza ngenxa yokwehla koxinzelelo lwegazi kwaye kunokukwenza ube buthathaka.
ZIYINTONI IZILUMKISO ngeFlibanserin?
Xa ulawulwa ngotywala, eli chiza linokubangela ukwehla okukhulu koxinzelelo lwegazi, nto leyo ekhokelela ekubeni nesiyezi, ukudinwa, kunye nokudumba, kwaye usenokutyhafa ngenxa yezi ziphumo. Kuyacetyiswa ukuba akuba uqalile ukusebenzisa iFlibanserin, kufuneka uyeke ukuthatha utywala. Nokuba ubuncinci botywala bunokubakhokelela kwiziphumo ezichaziweyo.
Ukungqinelana kunye ne-CYP3A4 inhibitors
Ukuba isetyenziswe kunye nee-YP3A4 inhibitors ezinamandla okanye ezilinganiselweyo, kunokwenzeka ukuba ube namava okunyuka kweFlibanserin, eya kuthi ifane nokusela ngokweqile. Oku kuyakubangela ukuba ube namava iziphumo ebezingalindelekanga zokusetyenziswa okugqithisileyo kwento. Ngale nto, kuya kufuneka uqaphele ukuba ukusetyenziswa kwezi zithinteli kuchasene, kuthetha ukuba kuya kufuneka uyisebenzise kuphela xa unyanzelwa ziimeko.
Contraindified kwizigulana ezinesibindi impairment
Ichiza alicetyiswa kubantu abanokhubazeka kwesibindi ngaphandle kokuba luncedo lwengcali yezonyango. Kucetyiswa ukuba ufune ingcebiso kugqirha ozokukunceda ukuphatha ukhubazeka kwesibindi sakho ngaphambi kokuqalisa ukusebenzisa eli chiza. Izifundo zibonise ukuba iFlibanserin (167933-07-5) yonyusa ukubonakaliswa kwabo baneziphene zesibindi xa kuthelekiswa nezo zinesibindi esisebenzayo, ezibabeka emngciphekweni ngakumbi wokukhula kwes syncope, hypotension, kunye noxinzelelo lwenkqubo yoxinzelelo lwengqondo.
Ukukhulelwa kunye nokukhulelwa
Akukho zifundo zicacileyo zibonisa ukuba ngaba le mveliso ibeka nayiphi na imingcipheko kubasetyhini abakhulelweyo okanye ababhinqileyo. Uvavanyo olwenziwe kwizilwanyana, lubonisa ukuba ityhefu yenzeka kuphela ebusweni besifo setyhefu besini. Ezinye zeziphumo zelo xesha zibandakanya ukufumana ubunzima bomzimba, ukulala kunye nesiyezi. Izilwanyana zilala ngaphezulu kunesiqhelo. Ezinye zezilwanyana zinamava okuzala kunye nophuhliso, kubandakanya ukungalingani kulwakhiwo kunye nokuthoba umzimba.
Iseza kumiselwa ukuba ngaba iFlibanserin powder (167933-07-5) ineempembelelo ekuhanjisweni kobisi lwebele lomntu, kwaye ayaziwa nokuba ingaba ikhona na impembelelo kubantwana abancancisiweyo. Uphononongo olwenziwe kwiigundane lubonise ukuba iyeza lakhutshelwa ubisi lwerhafu. Ngale nto, kukhuselekile ukuba ukusetyenziswa kweFlibanserin xa ukhulelwe okanye uncancisa abantwana kunokubangela isiphumo esibi kubasetyhini abancancisayo abanjengo-sedation, kwaye oku kunokuchaphazela neentsana ezinceliswa ebeleni.
Flibanserin ukunciphisa umzimba
Ngokwezifundo ezininzi kunye nohlalutyo lwe-hoc, abasetyhini abasebenzisa eli chiza ukuba basebenzise uvavanyo esini ukuphazamiseka komnqweno kunokwenzeka ukunciphisa umzimba. Masijongane nayo. Uninzi lwabafazi bayazi malunga nobunzima babo kwaye bayoyika ukusebenzisa nantoni na eya kuthi ichaphazele ubunzima babo. Luhlobo oluvuselelayo olo lokuba wazi ukuba ukusebenzisa iFLIBASERIN akubonisi siphumo sokufumana ubunzima ebantwini, kodwa endaweni yoko kuyabanceda bathulule ubunzima. Ukuba uneengxaki zokufumana ubunzima bomzimba kwaye ujonge indlela engenamsebenzi yokuyiphalaza, eli liyeza liyinto yokudibanisa.
Uphando malunga noku lwenzelwa ukuqinisekisa abantu basetyhini, kodwa bakhuselekile kuba uninzi lwabo luyathandabuza ukuthatha amayeza. Uninzi lwee-antidepressant ziyaziwa ukuba zibangela ukuthoba umzimba, kwaye abafazi boyika ukuba olu nyango luza kuba neziphumo ezifanayo.
Umcimbi ubangelwa yinto yokuba eli chiza lincinci le-5-HT2C receptor 5-HT2C agonist ikakhulu inxulunyaniswa nokulahleka kwesisindo, ekubeni ivunyiwe yi-FDA ngale nto kunye nenyani yokuba iFlibanserin incinci inike abantu basetyhini umbono ukuba ingabangela oko. ukuze bazuze ubunzima.
Olona hlobo kuphela lokonwabela iziphumo ezilungileyo kukuba Thenga iFlibanserin kumthengisi othembekileyo. Ngokunyuka kwesidingo sale mveliso, kuye kwakho ukunyuka kwabaxhasi abathi babonelela ngeyona nto ibalaseleyo yeFlibanserin. Ngelixa abanye benomdla onyanisekileyo entliziyweni, abanye bangemva kokugculela abathengi abanqwenelekayo. Ufuna ukuqinisekisa ukuba ufumana imveliso kumboneleli onokumthemba ngokupheleleyo. Unokufumana Flibanserin powder apho usenza isisombululo ngaphambi kokuyisebenzisa ngomlomo. Thatha ixesha lakho, wenze uphando olucokisekileyo ukuze ufumane okulungileyo I-Flibanserin iyathengiswa. Iziyobisi ziyimveliso ebuthathaka, kwaye ukufumana okungalunganga kunokwenza imeko yakho ibe mandundu ngakumbi kunokuba bekuko.
I-Flibanserin ingqineke isisisombululo esihle kakhulu kubafazi abaphulukene nomnqweno wesini ngaphandle kwesizathu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ufumane umgangatho ophezulu wale mveliso kwaye uyisebenzise ngokufanelekileyo ukuze ubone iziphumo. Kwakhona, kuya kufuneka uyisebenzise ngengqondo evulekileyo kwaye uqaphele ukuba isenokungasebenzi kuwe njengoko isebenzela omnye umntu. Ungakulibali ukufumana ingcebiso kagqirha ngaphambi kokuqalisa ukusetyenziswa kwayo ukufumanisa ukuba ungumgqatswa ofanelekileyo.
UJane McCall, uMfazi uViagra Flibanserin: Isikhokelo esigqibeleleyo soNyango lwe-Hypoactive ngesifiso seSondo (HSDD) kunye noKwandiswa kweLifera yeLibido ukuba ifikelele kwi-Orgasm enkulu kwaye iphelise imvakalelo yoxinzelelo; 1724181459
I-Amazon Digital Services LLC - I-Kdp Shicilela kuthi, i-2018, i-Pink Viagra (iFlibanserin): Isikhokelo seNcwadi kwiNtsika yokuPhuhliswa kwabaNtu abaDala eXhobisa iSondo iDrayivu kunye neNceda abaFazi bafezekise ii-Orgasm ezininzi, i-1729471161
IBorsini F, u-Evans K, uJason K, uRohde F, uAlexander B, uPollentier S (2002). "Ikhemesti yeflibanserin". Uvandlakanyo lweziyobisi lwe-CNS. I-8 (2): 117-42.
I-10 ye-testosterone ester ephezulu: yintoni efanelekileyo kuwe?
Indlela yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe yokudibanisa i-Trenbolone Inanthate Powder 2019
Yonke into malunga ne-Oxandrolone (Anavar), kuya kufuneka uyazi	I-Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) isebenza njani kubaakhi bomzimba